विमान दुर्घटना अपडेटः कसको कहाँ हुँदै छ उपचार ? को को थिए विमानमा सवार ? (सूचीसहित)
टावरको दिशा विपरीत गएपछि विमान दुर्घटना
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । टावरको निर्देशन विपरीत पाइलटले दिशा लिएपछि एकाएक दुर्घटना हुन पुगेको युएस बंगला विमान दुर्घटनाका घाइतेहरु मध्ये १२ को काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) सिनामंगलमा उपचार भइरहेको छ ।
घाइतेको सूची सार्वजनिक गर्दै साँझपख अस्पतालले केही घाइते अन्यत्र रिफर गरिएको पनि जनाएको छ । पिन्ची धामी र समिना व्यञ्जननकारसहित ३ जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ ।
धिरेन्द्र सिंह पुजनाको अर्थो वार्डमा उपचार भइरहेको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ भने बाँकी विदेशी नागरिक रहेका छन् ।
उद्धार गरी अस्पताल पुराइए मध्ये ८ को उपचारक्रममै निधन भएको थियो । मृत घोषणा गरेकामा हरिशंकर पौडेल, रकिबूल हुसेन, पृथुला रसिद र खवाज हुसेन (चालक), प्रवीण चित्रकार, सजना देवकोटा र परिचय नखुलेका अन्य दुई यात्रु रहेका छन् ।
पछिल्लो अपडेट अनुसार दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४९ पुगेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । विमानमा ७१ जना यात्रु मध्ये २१ घाइतेको उपचार भइरहेको छ ।
एक यात्रु नभेटिएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । अस्पताल पुर्‍याइएका चार जनालाई अन्यत्र रिफर गरिएको छ ।
उनीहरुमा किशोर त्रिपाठी, हरिप्रसाद सुवेदी, दयाराम ताम्रकार र केशव पाण्डेलाई अन्य अस्पताल रिफर गरिएको छ । केएमसीले रिफर गरेका मध्ये दरायामसहित तीन जनालाई ग्राण्डी अस्पताल धापासी लगिएको छ ।
यस्तै किशोर त्रिपाठी र हरिशंकर सुवेदीलाई ग्राण्डी अस्पताल टोखामा सिफारिस गरिएको छ ।
घाइते दयाराम ताम्राकारलाई न्यूरो अस्पताल र केशव पाण्डेलाई मेडिसिटी अस्पताल पठाइएको छ ।
केएमसी अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा दामोदर पोखरेलका अनुसार २५ घाइतेको उपचार भइरहेको छ । यस्तै नर्भिक अस्पतालमा पाँच जनाको उपचार भइरहेको छ ।
सो अस्पतालमा वसन्त बोहरा, सनम शाक्य, आशिष रञ्जित, विनोदराज पौडेल र एक बंगलादेशीको उपचार भइरहेको छ । अस्पताल परिसरमा आफन्तजनको भीड लागेको छ ।
साँढे २ बजेतिर प्लेन ल्यान्डिङका क्रममा दुर्घटनाग्रस्त विमान आगोको मुस्लो सहित क्र्यास भएको थियो ।
यसकारणले भयो दुर्घटना !
विमानस्थल स्रोतले विमान दसर्घटनाको कारण मिस अप्रोच’ ले भएको बताएको छ । यूएस बंगलादेश विमान दुर्घटना हुनुमा विमानस्थलले दिएको टावर रुट विपरीत विमान उड्न पुगेपछि दुघटना भएको बताइएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले उक्त विमानले अवतरण गर्ने बेलमा नै ‘मिस अप्रोच’ गरेकोले दुर्घटना भएको दाबी गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘जहाज ल्याण्ड गर्ने बेलामा विमानस्थलको टावर छेउबाटै आयो। झन्डै झन्डै पार्किङमा रहेको जहाजको अति नजिकबाट टच डाउन गरी कन्ट्रोल गर्न नसकेर पूर्व पट्टीको बार भत्काई खाल्डोमा गएर खस्यो,’ उनले भने, ‘आग्नी नियन्त्रक एलर्ट भएकोले आर्मी प्रहरी सबै मिलेर चाँडै उद्धार र नियन्त्रण भयो। जुन स्थितिमा आगो बलेको मैले देखेको थिएँ, त्यो स्थिति अझै १० मिनेट रहेको भए अझै भयावह स्थिति हुने थियो।’
यति हुँदा हुँदै पनि बंगला विमान पार्किङमा रहेको थाई एयरवेज विमानको पुछार पट्टीको भागमा ठक्कर हुनबाट जोगिएको थियो।
यसमा पाइलटले धावन मार्गमै दुर्घटना हुनबाट जोगाएको देखिन्छ । यसलाई हेर्दा दुर्घटना हुनु पूर्व पाइलट सचेत थिए ।
विमानमा को को थिए सवार ?
दुर्घटनाग्रस्त उक्त विमानमा सवार यात्रुको सूची सार्वजनिक भएको छ । विमानमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुमध्ये ३३ जना नेपाली थिए जसमा १३ नेपालीको ज्यान गएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल प्रशासनका अनुसार ३३ नेपाली, ३२ बंगालादेशी, १ चिनियाँ र २ माल्दिभ्सका नागरिक विमानस्थलमा सवार थिए ।
सावर गर्नेहरुको नामावलीः नेपाल
चालक दल: पृथुला रसिद (पाइलट)
ख्वजा हुसेन र किबुल हुसेन